कोरोना भाइरस संक्रमण’बाट भारतको मुम्बइमा स्याङजाका ५० वर्षीय कोषबहादुर विकको ज्या’न गएको छ । मुम्बइस्थित एक अस्पतालमा उपचारको क्रममा उनको मृ त्यु भएको हो । उनका पत्नी (जेठी) सावित्रा विक पनि अस्पतालमा उपचा’ररत छन्।
कोषबहादुरको ६ दिनअघि मुम्बइ’स्थित परेलमाको केएम अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृ त्यु भएको हो । उनको पार्थि’व शरीर भने आइतबार अन्तिम संस्का’र गरिएको भाइ कुलबहादुर विकले जानकारी दिए ।
विकलाई २० दिनअघि कोरोना भाइरस संक्रम’ण देखिएको थियो । सुरुमा ज्वरो आएपछि औषधि खाँदा पनि निको नभ’एपछि परीक्षण गर्दा कोरोना संक्र’मित पुष्टि भएको थियो ।
त्यसलगत्तै थप उपचारको लागि अस्पतालमा भर्ना भएको १४ दिनमा उनको मृ त्यु भएको भाइ विकले जानकारी दिए । उनले भाउजु भारतमै भएकाले नेपाल ल्याइन दिने वाताव’रण मिलाइन दिन नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन्।
कालीगण्डकी गाउँपालिका ४ घर भएका विक रोजगा’रका लागि ३० वर्षदेखि मुम्बइमा थिए । मुम्बइको प्याडा’रोडस्थित विनामी मेटल कम्पनीमा उनी काम गर्थे । उनका दुई पत्नी मध्ये एउटा स्याङजामा छन् भने अर्का पत्नी भारतमै छन्।
विवाह भएको २५ वर्ष पुग्दासम्म सन्तान नभएपछि साबित्रा’को आग्रहमा ६ महिनाअघि मात्र बिष्णुसँग दोस्रो विवाह गरेका थिए । बिहेलगत्तै उनीहरु ३ जना भारत गए । एक महिना’पछि कान्छी पत्नी बिष्णु भने स्याङजा फर्किइन्। साबित्रा पतिसँगै भारतमै बसिन् ।
बिष्णुको गर्भ रहेको छ । गर्भमा अहिले ६ महिने शिशु छ । आफ्ना सन्तानको मुख हेर्ने रहरले ५० वर्षमा दो’श्रो विवाह गरेका कोषबहादुरको इच्छा भने पूरा हुन सकेन।
बिहेपछि एक महिनामात्र पतीसँग बिताए’की बिष्णु विगत ५ महिनादेखि स्याङजामा छिन्। बिहेको ६ महिनामै श्रीमान गुमाउनुका पीडासँगै गर्भे टुहुरो सन्तान’लाई जन्म र कर्मको जिम्मे’वारी पनि उनमै थपिएको छ ।
सन्तान देख्ने कोष’बहादुरको सपना अधुरै रह्यो। विश्व महामा’रीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले उनको ज्या’न लियो । श्रीमानको नि धनको खबरले गर्भ’वती बिष्णु यहाँ भाव विह्वल छिन् । – अन्नपूर्णपोस्ट (फाइल तस्बिर)
Prevभारतबाट आएकी एक महिलाको क्वारेन्टाइनमै मृ’त्यु
Nextआज एकैदिन थप ९० जनामा कोरोना पुष्टि, कुन जिल्लामा कति ? हेर्नुहोस्…
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (63579)
भर्खर बिहे गरेकी स्वेताका लागि बद्री पंगेनीले गाए यस्तो गीत,स्वेताले दिईन् धन्यवाद (भिडियो) (60549)
आँचलले लेखिन् आलोचकहरुलाई मन रुवाउने पत्र, पलको विषयमा यसो भनिन् (भिडियो) (52093)
वीर अस्पतालमा आँखा झिकि’एको भन्ने शवको भिडियो बाहिरियो, यस्तो रहेछ भिडियो..हेर्नुहोस्.. (50832)
बिवाह पार्टी हुँदाहुँदै दुलाहाले दुलहीको तलको कपडा उचालेर भित्र टाउको छिराएपछि (भिडियो सहित) (49796)
आँचलले कसलाई हाल्ने भइन् मुद्दा? प्रमाण सहित उजुरी दिन प्रहरी कार्यालय पुगेपछि..(भिडियोसहित) (46570)
एक पिता जो छोरी लिन स्कुल पुग्दा उनको पाइन्ट अगाडिपट्टि भिजेको थियो ।सबैले पुरा पढ्नुहोला (46494)
अन्ततः काठमाण्डौंको होटलबाट प्रेमीसहित फेला परिन हराएकी लाहुरेकी श्रीमती (भिडियो सहित) (41416)
अचान’क छोरीको मोबाईल हेर्दा आमाबुबाको उ’ड्यो होस,यसबाट सबै जना सचे’त रहनुहोला (38639)
बेवारिसे श’व भनेर फेवातालवाट बाहिर निकालेपछि कृष्णको उड्यो होस्, आफ्नै भाईलाई मृ’त देखेपछी (भिडियोसहित) (33759)